MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA BULLDOG DOG - EEYAHA
Champ's Boss, waa 2 jir lab ah oo cadaan ah Ingiriis Bulldog, sawir qadarin leh Champ Bulldogs
Liistada eeyaha Ingiriisiga ee Bulldog Mix
Ingiriisiga Bulldog waa eey ballaaran, dhexdhexaad ah, is haysta oo leh lugaha gaagaaban. Jirka iyo madaxa ayaa aad u ballaaran oo leh maqaar dheeri ah oo ku yaal labada madax iyo foodda oo ku laaban laabma. Dhabannada ayaa fidiya dhinacyada indhaha. Afku waa balaaran yahay, gaagaaban yahay oo goglan yahay joogsi ballaadhan, qoto dheer. Sanka madow waa mid ballaaran oo leh dulal diiran. Indhaha madoobaa waa qoto dheer yihiin. Dhegaha ubaxyadu waa yar yihiin, dhuuban yihiin oo madaxa ayay saaraan. Daamanku waa kuwo ballaaran, aad u ballaadhan, oo laba jibbaaran oo bushimaha sare sudhan. Ilkaha waa inay yeeshaan qaniinyo hoostooda. Dabada waa toosan tahay ama waa la jiiday oo hoos baa loo qaaday. Dharka gaaban, fidsan ayaa toosan, siman oo dhalaalaya. Midabada koofiyada waxaa ka mid ah guduudka guduudka iyo midabbada kale ee guduudka, caddaan adag, casaan adag, fawn, fallow, piebald, huruud cirro leh ama casaan la dhaqay ama cadaan ah ama isku darka midabadan.
shaybaarka iyo iskudhafka eyga Australia
In kasta oo muuqaalka Ingiriisiga Bulldog uu xoogaa cabsi gelin karo, haddana wuxuu ka mid yahay eyda ugu wanaagsan. Isla sidaas oo kale ayay arki doontaa mid kasta ku soo xadgudbay , in yarna waxay halis ugu jiraan inay la kulmaan eey geesi ah oo kufilan inuu dibi dhasho. Waxaa lagu sifeeyey inuu yahay xayawaan aad u jecel oo la isku halleyn karo, u roon carruurta, laakiin ku caan baxay geesinnimo iyo awooddiisa ilaalin aad u wanaagsan. Bullheaded oo la go'aamiyay, noocani wuxuu noqon karaa mid aad u adag. Si fudud iskama dhiibaan. Bulldogs waa dad eey ah, raadiya dareenka aadanaha oo jecel wax kasta oo ay heli karto !! Feejignaan badan oo bina-aadam ah ayaa looga baahan yahay farxadda cayayaanka. Qaar ka mid ah Bulldogs-ka Ingiriisiga ayaa noqon kara xoogaa xukumaya una baahan milkiile yaqaan sida loo muujiyo hoggaan adag oo fahamsan dhaqanka aline canine . Bulldog ah oo fahmaya meesha ay ku jirto xirmada bini'aadamka ayaa ku wanaagsan, laguna kalsoonaan karaa dadka oo dhan. Tarankaani wuu ku fiican yahay xayawaanka guryaha lagu haysto , laakiin qaarkood waxay la dagaallami karaan eeyaha qalaad haddii aysan iyagu isu arkin inay yihiin kuwa raacsan xirmadooda. Markay Bulldogs da 'yar yihiin, way ka buuxaan tamar, laakiin gaabiso markay sii weynaadaan. Waxay u khuuraan si aad u xoog badan, badankood waxay leeyihiin dareemo iyo ujeedo jilicsan waana cunno cunno xun. Bulldogs oo muujinaya dabeecado ilaalin ah, sida ilaalinta alaabta guriga , cuntada, alaabta carruurtu ku ciyaarto, ama dhibco kale oo guriga ku yaal, ama eygu dagaal badan yahay ma lahan dad bini aadam ah oo hoggaamiye kooxeed u ah. Dabeecadani waxay dhacdaa oo keliya marka eeyaha loo oggolaado inay la wareegaan. Dabeecadahaan waa la sixi karaa marka milkiilayaashu ay bilaabaan inay muujiyaan hoggaan habboon. Eeyaha dareema inay u baahan yihiin inay guryahooda maamulaan kuma faraxsana sida eeyaha garanaya inay yihiin kuwa raacsan aadanaha, maadaama ay aad u culeys badan tahay eeyga inuu u baahan yahay inuu ilaaliyo dadka 'asaga'.
Dhererka: qiyaastii 12 - 16 inji (31 - 40 cm) (ma jiro dherer loo qoro, laakiin Bulldogs gaagaaban ayaa ka qiimo badan marka la muujiyo)
Miisaanka: Ragga 53 - 55 rodol (24 - 25 kg) Dumarka 49 - 51 rodol (22 - 23 kg)
Dhibaatooyinka xagga neefsashada qaarkood waxay leeyihiin dhuumaha yar-yar ee dabaysha sidoo kale. Sidoo kale aragga oo liita isha cherry , aad ugu nugul kulaylka kulaylka cimilada diirran ama qolalka kulul iyo baabuurta. Xasaasiyad daran. U janjeera burooyinka unugyada . Cilladaha dhalashada ayaa ku badan khadadka qaarkood. U nugul caabuqyada maqaarka, dhibaatooyinka sinta iyo jilibka. U nuglaanta gaaska, gaar ahaan marka la quudiyo nooc kasta oo cunto ah oo aan ahayn cunnadooda eyda caadiga ah. Ey yaryar waxaa badanaa lagu soo qaadaa qeybta dhalmada. Qaarkood waxay yiraahdaan waa sababta oo ah cabirka weyn ee eeyaha, hase yeeshe kuwa kale waxay ku andacoodaan inaad si dhib leh u garan karto farqiga u dhexeeya cabirka madaxa Bulldog oo leh cabirka madaxa ee noocyada kale markii ay caruurtu markii ugu horeysay dhasheen iyagoo ku andacoonaya in biyo xireenno aan ku filneyn la siiyo fursadda inaad iskudaydo oo aad si dabiici ah ubixiso sababo laxiriira sheekada weyn ee madaxa. Dad badan oo Bulldogs ah ayaa halis ugu jira inay yeeshaan foosha daciif ah tanina waxay kordhin kartaa halista dhalmada.
Ingiriisiga Bulldog wuxuu ku fiican yahay nolosha guryaha. Iyagu gudaha kuma jiraan firfircoonaanna way fiicnaan doonaan iyadoon deyr lahayn. Noocani waa eeyga gudaha. Bulldogs waxay ku fiican yihiin cimilada dhexdhexaadka ah maaddaama ay noocyadu si fudud u qaboojin karaan cimilada qabow oo ay dhibaato ka haysato qaboojinta xilliyada aad u kulul.
Ingiriisiga Bulldog wuxuu u baahan yahay in lagu qaato a socod maalinle ah si ay u buuxiso dareenkeeda asalka ah ee ah inay u haajirto. Shakhsiyaadkaas aan helin baahidani waxay u badan tahay inay qabaan arrimaha dhaqanka . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaasha qofka haya hogaaminta, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha hogaamiya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Bar iyaga inay galaan oo ka baxaan dhammaan albaabbada iyo iridda ka dambeysa aadanaha. Ingiriis Bulldogs oo qaab wanaagsan ku jira ayaa awood u leh inay dhaqso u dhaqaaqaan muddo gaaban.
Celcelis ahaan 8 sano. Qaarkood way sii cimri dheeraadaan halka kuwa kale ay ku cimri gaaban yihiin
4 - 5 eeyo yaryar oo ay sabab u tahay taranka weyn madaxiisa waxay u nugul yahiin inay u baahdaan qalliin qalliin
bichon cocker spaniel poodle qasan
Jaakad jilicsan, ganaax ah, timo gaaban ah way fududahay in la hagaajiyo. Shanlo oo ku caday burush adag, oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Ku masax wejiga maro qoyan maalin kasta si aad ugu nadiifiso laalaabka duuduubku. Noocani waa celcelis daadiya.
Ingiriisiga Bulldog wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa jasiiradaha Ingiriiska, wuxuu ka soo jeedaa mastiffkii hore ee Aasiya. Eyga ayaa loogu magac daray 'dibi' sababtoo ah isticmaalkiisa qaniinyada dibi iyo muuqaalkiisa adag ee dibi yar. Waxay ahaayeen dad dagaal badan, naxariis daran oo geesinimo leh oo awood u leh inay weeraraan dibiyada buuxa, ee ay ku sameeyeen dagaalka garoonka ka hor inta aan dhaqanka laga mamnuucin sharciga qarnigii 19aad. Bulldogs ayaa ka soo weerari doona salka hoose ilaa dibiga hoostiisa oo ujeedkiisu yahay qoorta, taas oo adkeyneysa in dibiga uu la dagaalamo. Bulldog maanta wuxuu leeyahay dabeecad aad uga duwan tan kuwii awoowayaashiis, laakiin wali wuxuu hayaa go'aan adag.
Mastiff, AKC Isboorti
Ey Ingiriis ah Bulldog
Sofi Ingiriisi Bulldog at 9 sano jir
Diesel the brown brindle English Bulldog at 5 sano jir
'Tani waa Bruno Flores. Waa 9 bilood jir Ingiriis Bulldog ah. Wuxuu jecel yahay inuu kubadiisa ku baacsado ardaaga isla markaana uu la joogo fallaagada. '
'Our Major Payne oo ku ciyaaraya burooyinkiisa.'
'Kani waa Duke, Ingiriiskeena Bulldog at 2 sano jir. Waxaan go aansanay inaan saxaarada talaabada caruurta saarno kursiga kuraasta si Duke uusan uga kicin oo uusan ugu dul seexan. Waa hagaag, sida go'an oo madax adag sida Duke yahay, wuxuu go'aansaday inaysan waxba ka hor istaageynin inuu ku seexdo 'kursigiisa' :) Duke waa eey weyn. Waxaan haynaa 3 wiil oo yaryar, Duke-na wuu ku fiican yahay iyaga. Waxaan ku noolnahay beer Duke dhib kuma qabo inuu ahaado eey beero, per se. Wuxuu jecel yahay banaanka iyo baacsiga bisadaha bakhaarka oo uu ka caawiyo fardaha. Wax dhibaato ah oo caafimaad ama maqaar ah nagama soo gaadhin isaga cunto habboon iyo hawlo badan oo bannaanka ka socda. Duke wuxuu u muuqdaa inuu xubin firfircoon ka yahay beeraha. '
Thabo Bulldog Ingiriis ah 8 bilood jir— 'Waa wiil aad u fiican. Wuxuu jecel yahay inuu haysto socod maalinle ah oo wuxuu ku fiican yahay carruurta. Dhibaato ayuu ku qabaa farta! LOL Wuxuu jecel yahay inuu seexdo kuna ciyaaro alaabada uu ku ciyaaro, gaar ahaan lafihiisa. In kasta oo wejigiisa xanaaqsan yahay ama waalan yahay hadana kubad noocan oo kale ah ayaa ka buuxda jacayl saafi ah '
sawirada isku darsiga xuduuda australia ee collie mix
'Dooley the English Bulldog Pup at 8 toddobaad jir wuxuu aadayaa socodkiisa galabnimo. Wuu jecel yahay inuu iska dhigo kamaradda! '
McKenzie ee 9 toddobaad waa mid ka mid ah Ey-ada Waxyaabaha Khaaska ah ee Si-D-Di, sawir qadarin leh Anne Dampier Ururinta Si-D-Di
Haddii aad waligaa waligaa soo martay Ingiriis Bulldog, waad ogtahay muuqaalkan! Eygan magaciisu waa Spike.
Eeg tusaalooyin badan oo Bulldog ah
Bulldog Sawirada 1
Bulldog Sawirada 2
Bulldog Sawirada 3
Sawirada Bulldog 4
Bulldog Sawirada 5
Bulldog Sawirada 6
Bulldog Sawirada 7
Bulldog Sawirada 8
Bulldog Sawirada 9
Bulldog Sawirada 10
Bulldog Sawirada 11
Bulldog Sawirada 12
Sawirada Bulldog 13
Bulldog Sawirada 14
Bulldog Sawirada 15
Bulldog Sawirada 16
Eeyaha Bulldog: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
stern bernard mix puppy
sawirada eeyo yaryar cadcad
sawirada eeyaha eyda buurta ee bernese
rhodesian ridgeback adhijir Jarmal sifooyin isku darka
8 todobaadkii jir muqisho adhijir Jarmal madow